LUNGISA UKUZIDLALELA KUNGASEBENZI WINDOWS 10 - ITHAMBILE
Lungisa ukuzidlalela kungasebenzi Windows 10
Lungisa ukuzidlalela kungasebenzi Windows 10: Ukuzidlalela ngokuzenzekelayo luphawu lwenkqubo yokusebenza yeMicrosoft Windows ethatha isigqibo sokuba zeziphi iintshukumo ekufuneka zenziwe xa i-drive yangaphandle okanye imidiya esuswayo ifunyenwe yinkqubo. Umzekelo, ukuba i-drive iqulethe iifayile zomculo ke inkqubo iya kuyibona ngokuzenzekelayo le nto kwaye ngokukhawuleza ukuba imidiya ekhutshwayo iqhagamshelwe iya kuqhuba isidlali semidiya yeWindows. Ngokufanayo, inkqubo ibona imifanekiso, iividiyo, amaxwebhu, njl.njl iifayile kwaye iqhube isicelo esifanelekileyo sokudlala okanye ukubonisa umxholo. Ukudlala ngokuzenzekelayo kukwabonisa uludwe lwezinto onokukhetha kuzo ngalo lonke ixesha imidiya esuswayo iqhagamshelwe kwinkqubo ngokohlobo lwefayile ekhoyo kumajelo eendaba.
Ewe, i-Autoplay yinto eluncedo kakhulu kodwa kubonakala ngathi ayisebenzi ngokuchanekileyo Windows 10. malunga nokuzidlalela kwi-Action Centre. Nokuba ucofa esi saziso kwiZiko lokuSebenza ayizukuzisa ibhokisi yencoko yababini ye-Autoplay, ngokufutshane, ayenzi nto. Kodwa ungakhathazeki ngayo njengoko yonke ingxaki inesisombululo lo mbandela nawo unokulungiswa kakuhle. Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha makhe sibone ukuba singayilungisa njani na i-Autoplay ingasebenzi kuyo Windows 10 kunye nesikhokelo sokulungisa ingxaki esingezantsi.
Indlela yoku-1: Seta kwakhona iiSetingi zokuzidlalela ngokuMiselweyo
Indlela yesi-2: Iinketho zokudlala ngokuzenzekelayo kwiiSetingi
Indlela yesi-3: Registry Fix
Indlela yesi-4: Qinisekisa ukuba iNkonzo yokuFumana i-Hardware yakwaShell iyasebenza
Indlela yesi-5: Lungisa uFakelo lweWindows 10
1.Cofa iSitshixo seWindows + X uze ukhethe Iphaneli yokulawula.
2.Cofa kwi-Hardware kunye nesandi ngoko cofa ukuzidlalela.
3.Skrolela ezantsi uze ucofe Lungisa kwakhona zonke izinto ezimiselweyo.
Isine. Cofa Gcina kwaye uvale iPhaneli yoLawulo.
5.Faka imidiya ekhutshwayo kwaye ujonge ukuba i-Autoplay iyasebenza okanye hayi.
1.Cofa iSitshixo seWindows + I ukuvula iiSetingi kwaye ucofe Izixhobo.
2.Ukusuka kwimenyu yecala lasekhohlo, khetha Ukuzidlalela.
3. Layita uguqulelo phantsi koDlala ngokuzenzekelayo ukuze usebenze.
4.Shintsha ixabiso le Khetha okuzenzekelayo kwe-AutoPlay ngokweemfuno zakho kwaye uvale yonke into.
5.Reboot PC yakho ukugcina utshintsho.
1.Cofa Windows Isitshixo + R uze uchwetheze regedit kwaye ucofe u-Enter ukuvula iRegistry Editor.
2.Hambela kweli qhosha lilandelayo loBhaliso:
3.Qinisekisa ukuba i-Explorer iphawulwe kwifestile yasekhohlo uze ucofe NoDriveTypeAutoRun kwifestile yasekunene.
4.Ukuba ixabiso elingasentla aliphumi ngoko kufuneka udale enye. Cofa ekunene kwindawo engenanto kwifestile yasekunene uze ukhethe Entsha > DWORD (32-bit) ixabiso.
5.Qamba eli qhosha litsha lokudala njenge NoDriveTypeAutoRun kwaye ngoku nqakraza kabini kuyo ukutshintsha ixabiso layo.
6.Qinisekisa ukuba i-hexadecimal ikhethiwe kwaye ingaphakathi Indawo yedatha yexabiso ngenisa i-91 emva koko ucofe u-Kulungile.
7.Kwakhona yiya kweli qhosha lilandelayo lobhaliso:
8.Landela amanyathelo ukusuka ku-3 ukuya ku-6.
9.Phuma kwiRegistry Editor kwaye uqalise kwakhona iPC yakho ukugcina utshintsho.
Oku kufanele Lungisa ukuzidlalela kungasebenzi Windows 10 kodwa ukuba akunjalo qhubeka uye kwindlela elandelayo.
1.Cofa Windows Isitshixo + R uze uchwetheze iinkonzo.msc kwaye ucofe u-Enter.
2.Skrolela ezantsi de ufumane Ukufunyanwa kwe-Hardware yeShell inkonzo emva koko cofa ekunene kuyo kwaye ukhethe Iipropati.
3.Qinisekisa ukuba uhlobo lokuQalisa lumiselwe Iyazenzekela kwaye ukuba i inkonzo ayisebenzi, cofa Qala.
4.Cofa Faka kulandele Ok.
Le ndlela yindlela yokugqibela kuba ukuba akukho nto isebenzayo ke le ndlela ngokuqinisekileyo iya kulungisa zonke iingxaki ngePC yakho. Ukulungisa Faka nje usebenzisa uphuculo lwangaphakathi ukulungisa imiba ngenkqubo ngaphandle kokucima idatha yomsebenzisi ekhoyo kwinkqubo. Ngoko landela eli nqaku ukuze ubone Uyilungisa njani iFakelo Windows 10 ngokulula.
Lungisa ukuQhagamshela kwakhona isilumkiso sakho sokuqhuba Windows 10
Khubaza isihluzo seSmartScreen ngaphakathi Windows 10
Lungisa imposiso ngo-1962 Akukho Nkqubo yokuSebenza ifunyenweyo
Yiloo nto onayo ngempumelelo Lungisa ukuzidlalela kungasebenzi Windows 10 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sikhokelo zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.